ल्यापटप किन्दै हुनुहुन्छ ? यी चार कुरामा ध्यान दिनुहोस् - निर्माण खबर
बजारमा विभिन्‍न ब्राण्ड र मूल्यका ल्यापटपहरु उपलब्ध हुन्छन् । कतिपय ल्यापटपहरु विशेष काम तथा प्रयोगकर्ताका लागि भनेरै डिजाइन गरिएका हुन्छन्, जुन अन्य आम प्रयोगकर्ताका लागि खासै उपयोगी नहुन सक्दछन् । बजारमा कतिपय पुराना मोडलका ल्यापटप पनि हुन्छन्, जुन खरीद गर्नु उपयुक्त हुँदैन । त्यसैले कुन कामका लागि ल्यापटप खरीद गर्ने हो ? अनि आफ्नो काम र दामका लागि सुहाउँदो ल्यापटप छनोट कसरी गर्ने ? यसका लागि यी चारवटा कुरामा ध्यान दिनुपर्दछः …
Previous articleअसोज मसान्तभित्र थप १ करोड ५ लाख ४८ हजार मात्रा खोप भित्रिने
Next articleकार्यवाहक प्रधानसेनापतिको जिम्मा प्रभुराम शर्मालाई दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय